River River River - Xalliyo dhammaan waraaqaha laga soo qaato AZ online
Daarista webiga magaalada
Sidee ayaa dhibcooyinka loo siiyay City Land River?
Mabaadi'da iyo xalalka webiga magaalada
Xeerarka River River River waa kuwo aad u fudud oo dhakhso leh oo sharaxaya: inay awoodaan inay ciyaaraan magaalada, dhulka, webiga oo aad u baahan tahay 2 ama ciyaartoy kale. Ciyaaryahan kasta wuxuu u baahan yahay warqad faaruq ah oo ah warqad DINA-4 iyo qalin.
Xeerarka wabiga ee magaalada ee magaalada
Warqadda warqadda, ciyaartoyda waxay abuurayaan miis. Qodobada guud ayaa lagu qoray miiska.
bilaabin City, Land, River oo markaas soo raacay by arrimaha kale sida dhirta, xirfad, xayawaanka ama maadooyinka xitaa aan caadi ahayn sida cunidda, cabidda, baabuur, celebrity, qalab ama calaamad fashion. Mawduucyada waxay leeyihiin si ay u diyaarin ka hor la ciyaartoyda kale.
Ciyaartu si tartiib ah ayey u sheegeysaa alfabeetada A ilaa Z iyo ciyaaryahan kale waa inuu yiraahdaa "Jooji" mar uun. Hadda dhamaan ciyaartoyduba waa inay ka helaan erayada qaybta ku haboon oo leh warqadda loo doortay. Ka sokow magaalada, dhulka iyo webiga, mawduucyada caadiga ah ayaa weli ah xayawaanka, dhirta, magacyada iyo shaqooyinka.
Qeybta hoose ee boggan, waxaan ku bixinnaa xalal muunado ah mawduucyo badan oo qalaad sida qalabka muusikada ama cocktails.
Qofkii ugu horeysay ee warqadda buuxiyey wuxuu dhahaya "joojiya" iyo dhamaan ciyaartoyda kale waa inay isla markiiba geliyaan qalinka. Hadda qofka ugu horreeya wuxuu bilaabaa inuu akhriyo qaybta koowaad. Dhibcaha erayada waxaa loo qaybiyaa sida soo socota.
Haddii dad badan ay leeyihiin erey isku mid ah, markaa 5 kasta waxay heshaa dhibco, haddii qof keligiis leeyahay kelmad, wuxuu helayaa dhibcaha 10. Si kastaba ha noqotee, haddii qof uu leeyahay kali kali kali qaybta, 25 wuxuu dhibcahaa qaataa. Sidaa daraadeed wareeg walba waxay raacdaa mabda'a isku mid ah. Dhibcaha waxaa lagu daraa wareeg kasta marba marka ugu danbeysa midka ugu dhibcaha badani waa guuleyste.
Talada laga soo bilaabo dhaqanka: Mararka qaarkood mararka qaarkood waxay dhacaan inta u dhaxeysa ciyaartoyda marka qofku u shaqeysto, si uu u dhaqso, u qor shuruudaha aan laga bogsan karin. Maadaama aad ku heshiin karto sida xeerarka webiyada ee waddanka ee magaalooyinka saddexaad waa inay sidoo kale awoodaan inay akhriyaan shuruudaha si ay xal u helaan.
Qaabee si aad u soo daabacdo oo u daabacdo wareeggaaga xiga
Waddanka magaalada webiyada khudbadaha casriga ah
Nidaamka Dhulka ee Degmada Cheater
Magaalooyinka magaalada moodooyinka xalka dejinta
Gummitwist ciyaaro Cayaar wakhti lacag la'aan ah